कुमार पौडेल र सरोजनारायणको हत्या बहाना मात्र ! | सहारा टाइम्स
Home » Politics » कुमार पौडेल र सरोजनारायणको हत्या बहाना मात्र !
कुमार पौडेल र सरोजनारायणको हत्या बहाना मात्र !
केही दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले प्रतिनिधिसभा अवरोध गर्दै आइरहेका छन् । त्यसको मुख्यकारण हो सर्लाही जिल्लामा प्रहरीको गोलीबाट सरोजनारायण सिंह र कुमार पौडेलको मृत्यु ।
आन्दोलनलाई नियन्त्रण लिन खोज्दा चलेको गोलीबाट सरोजनारायणको मृत्यु भएको छ भने दाहोरो भिड्न्त कुमार पौडेललाई प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको दावी छ तर काँग्रेस र राजपा नेपालले त्यो गैरन्यायनिक हत्या हो भन्दै त्यसको छानविनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
जसको जसरी हत्या वा मृत्यु हुनु मानव अधिकारको दृष्टिले त्यो राम्रो होइन । त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु पर्छ । त्यसको बारेमा अवाज उठ्नुपर्छ । काँग्रेस र राजपा नेपालले हत्याको बारेका छानविन हुनुपर्छ भनि अवाज उठाउनु जायज हो ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कुमार पौडेल र सरोजनारायण सिंहको हत्यालाई लिएर जसरी कुरा उठाएका छन् त्यो शंकाको घेरामा गएको विश्लेषकहरुको दावी छ । यो देशमा यो भन्दा ठूला ठूला हत्याका घटना भएका छन् । इन्काउन्टर पनि थुप्रै भएका छन् तर यिनीहरुको बारेमा नबोलेर कुमार पौडेल र सरोजनारायण हत्याको विषयलाई किन इशु बनाएको होला त भनि जिज्ञासा सर्वत्र छ ।
कुमार पौडेल र सरोजनारायण सिंहको हत्या वा मृत्यु काँग्रेस र राजपाका लागि एउटा बहाना मात्र हो, मुख्य कुरा त सरकारलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने भन्ने नै हो । राजपा नेपालसँग संसद अवरोध गर्ने वा सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने मुद्दाको कमी थिएन । मधेशमा सैयों जनाको हत्या भएका छन् । रेशम चौधरी जेलमा हुनुहुन्छ । सविधान संशोधन हुन बाँकी नै छ ।
आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा छन्, कोही जेलमा छन् भने कोही भगौडा भएका छन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ । तर काँग्रेसले यी मुद्दाहरुमा राजपा नेपालसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा थिएन । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि राजपा नेपालले विजनेश पाइरहेका थिएन । उता, काँग्रेस पनि संसदमा कमजोर भइरहेको थियो । त्यतिबेला एक अर्कालाई सहाराको आवश्यकता थियो । तर मुद्दा पाइरहेको थिएन ।
रेशम चौधरी र सविधान संशोधनको मुद्दामा तत्कालै राजपा नेपाललाई सहयोग गर्ने पक्षमा काँग्रेस देखिदैन । सविधान संशोधन र रेशम चौधरीको मुद्दामा काँग्रेसले राजपा नेपाललाई साथ दियो भने जनस्तरमा उसको आलोचना हुनसक्छ भन्ने कुरा काँग्रेसले राम्रोसँग बुझेको छ ।
टीकापुरको घटना शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रतिर परेको छ । देउवाले त्यसमा बोल्नै हुँदैन, यदि बोल्नुभयो भने त्यहाँका जनताले भोलीपल्टै देउवाको पुतला चलाउँछन् । सविधान संशोधनको विषयमा पनि त्यही हो । झन लाल आयोगको प्रतिवेदनको बारेमा देउवाले बोल्नु नै हुँदैन । किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नै सो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । एक समय थियो, काँग्रेस पार्टीले सविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगेको थियो । तर त्यो पास हुन सकेको थिएन ।
अहिले परस्थिति फेरिएको छ । राजपा नेपालले उठाउँदै आएको कुनै पनि मागको बारेमा काँग्रेसले खुलेर बोल्ने आवस्थामा छैन । अनि कार्यगत एकता गर्ने उपाय के त ? त्यति नै बेला सर्लाहीमा कुमार पौडेल र सरोजनारायण सिंहको हत्या भयो र यी दुई दलका लागि एउटा ठूलो बहाना बन्यो । संसदमा कार्यगत एकता गर्ने निहु बन्यो ।
सरकारलाई जसरी पनि गलाउने, घेराबन्दी गर्ने ती दलको उद्देश्य हो । राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवसँग कुमार पौडेल र सरोजनारायण सिंहको मृत्युलाई किन मुख्य मुद्दा बनाउनु भयो, यस्ता थुप्रै हत्या देशमा भए, त्यतिबेला चुप रहनुभयो तर देशमा प्रतिबन्ध लगाई सकेका समूहका नेता मारिदा तपाईहरु किन संसद नै अवरोध गर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो भनि जिज्ञासा राख्दा उहाँले उनीहरु कुन विचार र कुन पार्टीमा आवद्ध थिए, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन, गैरन्यायिक हत्या भएको हो, इन्काउन्टरमा मारेको हो त्यसैले त्यसका छानविनको माग गरेको बताउनुभयो ।
अरुअरुको विषयमा पनि आफूहरु बोलेको बताउँदै उहाँले सरकार आफ्नै कारणले घेराबन्दीमा पर्दै गएको बताउनुभयो । जनताले आफूहरुलाई जेका लागि यहाँ पठाएको छ त्यो काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले हत्याको छानविन गरि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँदैन तबसम्म संसद अवरोध गरिरहने चेतावनी दिनुभयो । विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेल र सरोजनारायण सिंह मारिएको घटनाको छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेस र राजपाले यसअघि पनि संयुक्त रुपमा संसदमा अवरोध गरेका थिए ।
राजपाका संयोजक यादवले आफूहरुले उठाएका मागको विषयमा आजसम्म कुनै प्रगति नभएकाले संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिनुभयो । राजपाले मधेस आन्दोलनको घटना छानविन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सर्लाही घटनाको संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ । तर, सरकारले जहिले पनि आश्वासनमात्र दिने गरेको राजपाको आरोप छ ।
सविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाय र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा काँग्रेससँग छलफल भइरहेको छ । सविधान संशोधनका बारेमा काँग्रेसले पहिला कुरा उठाएको कारणले अहिले उठाउने समस्या छैन । यद्यपी के के विषयमा उठाउने त्यसमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।